UK: Nanjavona Tsy Teo Amin’ny Làlam-be Olaimpika Tao Londona Ny Sainam-Pirenen’i Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2012 5:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, বাংলা, bahasa Indonesia, Español, 日本語, Filipino, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Lalao Olaimpika ao Lodona 2012.
Ny 24 Jolay 2012, fotoana fohy talohan'ny hahatongavan'ny afo olaimpika hamakivaky an'i Londona , nesorina teo amin'ny Regent Street tao an-drenivohitr'i Angletera ny sainam-pirenen'i Taiwan. Ny sainam-pirenena hafa rehetra dia nijanona nihantona teo hatrany niarahaba ny fahatongavan'ireo solontena avy amin'izao tontolo izao ho amin'ity lalaon-dohataona ity.
Marobe ireo Taiwnais diso fanantenana tamin'ity fanjavonana tampoky ny sainam-pirenena ity. Yi-hao Liao, mpampiasa Facebook, dia nitaraina [zh]:
Indrisy…Fotoana fohy monja aho no faly.
Miomana handray izao tontolo izao i Londona ho fanombohan'ny lalao Olaimpika.
lol_oopsie, mpampiasa ny Reddit , dia nanontany ny antony nanesorana ny sainam-pirenen'i Taiwan :
Liana te-hahafantatra aho na ny manampahefana ao Londona no nisavoritaka, na ny manampahefana Shinoa no nampitandrina an-dry zareo hanàla azy io. Na ahoana na ahoana, heveriko fa mendrika hifantohan'ny saina izany. Ny ankamaroan'ireo mpandrakotra vaovao rehetra momba ny lalao Olaimpika no tsy niraharaha azy ity.
mintytiny, iray hafa mpampiasa Reddit, no niezaka hanome valiny :
Na tsy nisy aza fanazavana natolotra, araka ny nambaran'ny Regent Street Association, ny sainan'ny lalao Olaimpika no hampiasain-dry zareo ho entina maneho an'i Taiwan.
Tsy maintsy ambarako, tsy tena mitombina izany ary tsara ny hisian'ny fanazavana metimety kokoa .
Iray hafa mpampiasa Facebook, i Melissa Alexender, no nanamboatra sary ho endri-panoherana tamin'ny nanesorana ny sainam-pirenen'i Taiwan :
Sarim-panoherana avy amin'i Melissa Alexender, tao amin'ny Facebook.
Taorian'ilay sary, Melissa dia nanainga ny hafa mba handefa mailaka ho an'ny mpitantana ny Regent Street, Anastasia, sy hitaky amin'izy ireo hametraka ny sainam-pirenena Taiwan indray. Ho valinteny ho an'ny antson'i Melissa, Kenneth Wong, dia nanoratra ho an'ny Regent Street Association ary nandefa ny valinteny eo ambanin'ny sary nataon'i Melissa :
Misaotra amin'ny mailaka nalefanao.
Nojerena io olana io ary azo amafisina fa rahampitso hariva dia hiverina hitsangana ny saina Shinoa avy any Taipei.
Manome toky anao aho fa ho eo daholo ny sainam-pirenen'ireo firenena rehetra mifaninana.
Diso fanantenana tamin'ilay valinteny i Melissa Alexender :
Tsy ny sainam-pirenena Shino avy any Taipei no tadiavinay fa ny sainam-pirenenay! Tsy tafiditra ho isan'izay rakofan'ny Network of London Olympic Route (Tambajotran'ny làlana lalovan'ny lalao Olaimpika) ny Regent Street, na koa hoe ampahany amin'ireo toeram-pilalaovana, noho izany, tsy dia misy antony tokony handàvana ny fametrahana ny sainam-pirenena Taiwanais !
Mandritra izany, ilay mpanome endrika, Tammy Lin, dia nanoratra lahatsoratra iray manohina ny fo niteraka soso-kevitra sasantsasany avy amin'ny fahaiza-mamorona mba hanitsiana ny zava-misy, toy ny fampidirana mangigina ny sainam-pirenan'i Taiwan ho eny an-dalambe, fanamboarana sainam-pirenena amin'ny fomba fanaovana dokambarotra 3D na famadihana azy amin'ny alàlan'ny QR code.